Ny androaniko | Janoary 2015
[Lasalasa fisainana ] 23 Janoary, 2015 13:32
...miteraha hahita !
Eto am-piatrehana ny safidin-drafotsikely amin'izay fianarana ambony ho ataony aho dia tonga saina fa tena misy lesoka be mihitsy ny fahaizako mikirakira sy mitsikaraka eto amin'ny aterineto eto. Ekeko fa tsy dia manintona ahy loatra izy ity fa voafetra ny tontoloko eto. Tsy dia mandany andro mitady zava-baovao eto aho fa zay mandalo ny masoko sy ren'ny sofiko ihany.
Kanefa atý amin'ny taona roa arivo dia ato daholo ny torolalàna sy ny sosokevitra sy ny fitarihana ilain'ny mpianatra (sy ny ray aman-dreny koa). Hatramin'ny fisoratana anarana.
Tsy mety amin-drafotsibe ilay izy fa naleony niantso vonjy tamin'ny mpampianatra mihitsy androany. Satria ankoatra ilay very ato anaty ala kirihitry ny tolotra isan-karazany eto amin'ny aterineto dia tsy mora koa miatrika izany miaraka amin'ny zaza miala sakana (hihihi miteraha hahita hono koh).
Tsara ilay rizareo mahalala ny zavatra tiany sy manana ny zony feno hifidy izany fa tsy toa antsika nanoa be fahatany ny ray aman-dreny. Fa rehefa eo amin'ny taonan'ny miala sakana izy dia mbola tantara koa ny manazava aminy ny lafy tsara sy lafy ratsin'ny fanapahakeviny fa matoa izy nifidy zavatra iray dia tsara iny aminy, amin'iny fotoana iny fa tsy mijery ny atsy ho atsy izy.
Marina fa vao nanomboka ny taona dia efa nisy ny resadresaky ny tompon'andraikitra eo amin'ny fitarihana sy fanoroana azy ireo amin'ny izay taranja mety hanavanana azy sy azony atao, nanazava azy ireo koa ny asa azony atao rehefa vita ny fianarana. Izany hoe nisy fihaonambe aloha dia avy eo noraisina sy niresahana tsirairay izy ireo. Mba tiako loatra iny fomba iray iny. Kanefa nilaiko ihany ny fanampian'ny mpampianatra azy mivantana. Tsy miteny aho hoe ananany hena-maso kokoa fa mba feo hafa afaka hampieritreritra azy hoe tsy dia diso loatra ilay an'i neny.
Hitako nilamindamina ny sainy ka asa izay ho tohiny. Mandrimandry saina koa izy fa mbola afaka tsy miala eto Roma avy hatrany raha vao afaka bac izany. Fa mba azony aloha hoe ny fampianarana eto Italie mihitsy no latsa-danja ka tsy tokony ataony ambanin-javatra ny vintana ananany hoe manana vatsy hafa sy mafonja.
Kely ny zaza, kely ny adintsaina. Lehibe izy dia lehibe koa ny adin-tsaina. Mora ny nisafidy ho azy iny sekoly nataony nandritra ny 15 taona iny. Lehibe indray ny fiasan-doha hanampy azy hisafidy ny hataony eny amin'ny anjerimanontolo. Lasa zao !!!
Na izany aza, misy fifaliana manafana ny foko amin'izao resaka zao satria nofinofiko hatramin'izay ny ho mpandika-teny saingy tavela any anaty tiroara any ilay nofy fa nananihany ilay fiainana ka tsy tanterako ilay izy. Efa zary bogongolo mihitsy aza. Tsaroako nitselatra mihitsy ny foko nilazany taorian'ny fihaonana tamin'ny tompon'andraikitra hoe io no fianarana tiany hatao. Tiako fa mba nalainy tamiko ihany izay fitiavana fiteny maro izay, ary voafehiny tsara hoy ny mpampianatra ka tsy misy atahorana fa mila milofo fotsiny izy. Let it be.